Izindaba - Izingxenye Zesistimu Yamandla Ogesi Welanga
Uhlelo oluphelele lwasekhaya lwamandla kagesi adinga izinto zokukhiqiza ugesi, ukuguqula amandla abe yimanje eshintshashintshayo engasetshenziswa yimishini yasekhaya, ukugcina ugesi okweqile nokugcina ukuphepha.
Amapaneli elanga ayingxenye ebonakala kakhulu yohlelo lokuhlala lukagesi welanga. Amapaneli elanga afakwa ngaphandle kwekhaya, imvamisa ophahleni futhi aguqula ukukhanya kwelanga kube ugesi.
Umphumela we-photovoltaic inqubo yokuguqula ukukhanya kwelanga kube ugesi. Le nqubo inika amaphaneli elanga elinye igama lawo, amaphaneli we-PV.
Amapaneli elanga anikezwa izilinganiso zokukhishwa kuma-watts. Lesi silinganiso ubukhulu obuphakanyiswe yiphaneli ngaphansi kwezimo ezinhle. Okukhiphayo iphaneli ngayinye iphakathi kwama-watts ayi-10 kuye kwangama-300, ngama-watts ayi-100 kube ukumiswa okuvamile.
Ama-Solar Array Mounting Racks
Amapaneli elanga ahlanganiswa afanayo futhi avame ukufakwa ngenye yezindlela ezintathu: ophahleni; ezigxotsheni ezikulayini wamahhala wokuma; noma ngqo emhlabathini.
Amasistimu afakwe ophahleni ajwayelekile kakhulu futhi angadingeka ngezimiso zomkhawulo. Le ndlela iwubuhle futhi iyasebenza. Inkinga enkulu yokufakwa kophahla ukulungiswa. Ngophahla oluphakeme, ukususa iqhwa noma ukulungisa izinhlelo kungaba yinkinga. Amaphaneli awavami adinga ukunakekelwa okuningi, noma kunjalo.
Ukuma kwamahhala, ukuhlelwa kwamapulangwe kungasethwa ukuphakama okwenza ukugcinwa kube lula. Inzuzo yokulungiswa okulula kufanele ilinganiswe nendawo eyengeziwe edingekayo kumalungu afanayo.
Amasistimu aphansi aphansi futhi alula, kepha awakwazi ukusetshenziswa ezindaweni ezinenqwaba ejwayelekile yeqhwa. Isikhala futhi siyabhekelelwa ngalezi zinto ezihlanganisiwe.
Akunandaba ukuthi uhlela kuphi ukuhlelwa, izintaba zilungiswa noma zilandelwa. Ukukhweza okungaguquki kusethwe kabusha ukuphakama ne-engeli futhi akusuki. Njengoba i-engela yelanga iguquka unyaka wonke, ukuphakama ne-engeli yezintaba ezihleliwe kungukuvumelana okuhweba i-engeli enhle yokufakwa okungabizi kakhulu, futhi okuyinkimbinkimbi.
Ukulandelana kwamalungu okuhamba kuhamba nelanga. Ukulandelelwa kwamalungu amaningi kuya ngasempumalanga kuya entshonalanga nelanga bese ulungisa i-engeli yawo ukugcina okuhle njengoba ilanga lihamba.
I-Array DC Nqamula
Ukunqamula i-Array DC kusetshenziselwa ukunqamula ukuhleleka kwelanga ekhaya ukuze kulondolozwe. Ibizwa ngokuthi ukunqamuka kwe-DC ngoba ukuhlelwa kwelanga kukhiqiza amandla e-DC (aqondile manje).
Amapaneli welanga namabhethri akhiqiza amandla e-DC (aqondile manje). Izinto zasendlini ezijwayelekile zisebenzisa i-AC (yamanje eshintshanayo). I-inverter iguqula amandla e-DC akhiqizwa ngamapaneli elanga namabhethri kumandla we-AC adingwa yimishini.
Izinhlelo zamandla elanga zikhiqiza ugesi emini, lapho ilanga likhanya. Ikhaya lakho lifuna ugesi ebusuku nangezinsuku ezinamafu - lapho ilanga lingakhanyi. Ukucisha lokhu kungafani, amabhethri angangezwa ohlelweni.
Imitha Yamandla, Imitha Yensiza, Imitha Yekilowatt
Kuzinhlelo ezigcina uthayi kugridi yokusetshenziswa, imitha yamandla ilinganisa inani lamandla asetshenzisiwe kusuka kugridi. Kuzinhlelo ezenzelwe ukuthengisa amandla okusetshenziswayo, imitha yamandla ibuye ilinganise inani lamandla athunyelwa yisistimu yelanga kugridi.
Ezinhlelweni ezingaboshelwe kugridi yokusetshenziswa, i-generator yokwenza isipele isetshenziselwa ukunikeza amandla ngezikhathi zokukhishwa kohlelo oluphansi ngenxa yesimo sezulu esingesihle noma ukufunwa okukhulu kwekhaya. Abanini bemizi abakhathazekile ngomthelela odalwa abakhiqizi bezemvelo bangafaka i-generator esebenzisa uphethiloli ohlukile njenge-biodiesel, kunokuba uphethiloli.
Iphaneli yephula, Iphaneli ye-AC, Iphaneli Yesekethe Yesekethe
Iphaneli yokuqhekeza yilapho umthombo wamandla uhlanganiswa khona namasekethe kagesi asekhaya lakho. Isifunda yindlela eqhubekayo yocingo oluxhumekile olujoyina ndawonye izindawo zokukhanyisa nezibani ohlelweni lukagesi.
Esifundeni ngasinye kunokwephula isifunda. Ama-breakers wesekethe avimbela izinto eziseseketheni ekudwebeni ugesi omningi futhi zidale ingozi yomlilo. Lapho izinto ezisebenza esifundeni zifuna ugesi omningi kakhulu, ikhefu lesifunda lizocisha noma likhubeke, kuphazamise ukuhamba kukagesi.
Isilawuli sokushaja - esaziwa nangokuthi isilawuli sokushaja - sigcina amandla afanele okushaja amabhethri ohlelo.
Amabhethri angakhokhiswa ngokweqile, uma onikezwa amandla aqhubekayo. Isilawuli sokushaja silawula i-voltage, sivimbela ukushaja ngokweqile futhi sivumele ukushaja lapho kudingeka. Akuzona zonke izinhlelo ezinamabhethri: ngokuningi ngezinhlobo zezinhlelo, bona: Izinhlobo ezi-3 ze-Residential Solar Power Systems.